». Ry zareo avy eo anivon’ny rafitra alemanina Friedrich Ebert moa no mikarakara ity hetsika mandritry ny 3 andro ity etsy Ankatso ary hampahafantarina lalindalina, raha ny fanazavana, ny atao hoe demokrasia sosialy.
Saika gaga amin’ny fihetsik’ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 22 mikasa ny hanemorana ny fifidianana nefa sady manao propagandy ihany avokoa ankehitriny ireo mpanao politika naneho ny heviny. Misy kosa anefa ireo milaza fa ilaina izany ho fampivelarana ny demokrasia sady fanamafisana fa ilaina ny fifidianana na dia mbola tsy tomombana aza ny fitsipi-dalao.
Etsy amin’ny Piment café Antanimena no fotoana hifanomezan’i Olombelo Ricky amin’ireo mpakafy azy rahampitso alina ao anatin’ilay fampisehoana takariva mitondra ny lohateny hoe « Amorom-parihy ». Ho heno amin’io alina io indray izany ireo hira nandrotsirotsy izay 30 taona izay toy ny « Amorom-parihy », mazava ho azy, « Iray lalana », « Taratra hazavana ».